Akhriso Galmudug Oo Laga Mamnuucay Shirarka Siyaasadeed. – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa soo saaray amar lagu joojinayo shirarka siyaasadeed ee aan ogolaansho looga heysan maamulkiisa, isagoo faray laamaha ammaanka iyo ciidamada in la joojiyo kulamada wax u dhimaya amniga iyo xasiloonida deegaanada Galmudug.
Amarkan ayaa ka dambeeyay, markii ay soo baxday warar sheegaya inuu socdo qorshayaal ka dhan ah Madaxweyne Xaaf oo la doonayo in xilka looga qaado.
Madaxweyne Xaaf ayaa si deg deg ah shalay dib ugu laabtay Cadaado, kaddib markii uu ka soo kicitimay magaalada Dubai ee dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, halkaasoo maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa, isagoo la saftay Isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka ee xiriirka u jaray Qatar.
Dhinaca kale Madaxweyne Xaaf ayaa la sheegay inuu maanta siiyay mushaar shaqaalaha, Xildhibaanada iyo Ciidamada, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Dhaqaale uu Imaaraadka ka soo qaatay uu ku furdaamiyay.
Al-Shabaab oo la wareegay deegaanka Tarako ee Gobolka Gedo